Maxay tahay arrinta ku salaysan carruurta laga reebay waalidiintood muhaajiriinta ah ee haraysay Maraykanka? - BBC News Somali
20 Juunyo 2018
Waxa golaha Congress-ka ee Maraykanka ka sii dhex xoogaysanaya dedaalka lagu doonayo in lagu meel mariyo sharci cusub oo meesha ka saari doona siyaasadda lagu kala qaarayo caruurta iyo waalidiintooda soo galootiga ah.
Xubno magac leh oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriyaga ayaa sheegay in markii Trump booqday Aqalka Capital Hill galabnimadii salaasadii uu Trump muujiyey in uu u heellan yahay in uu saxeexo uun sharcigii uu Congress ku meel mariyo.
Mar kii hore se waxa uu ku adkaysanayey in uu meel marin doono isbedello sal iyo baar ah oo ay ka mid yihiin in goluhu meel mariyo lacag lagu dhiso gidaar lagu kala xidho dalkiisa iyo Mexico.
Laakiin siyaasadiisa dal iyo dibadba aad baa looga dhaleeceeyey, goluhuna wuxuu haatan ka doodayaa sidii meel dhexe la iskugu iman lahaa. Qaar ka mid ah mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ayaa madaxweyne Trump ku qeyliyay markii uu aqalka soo galay.
Intaa uu socotay dooddu ayaa xubnaha Dimuqraadiga ahi waxay warfidiyeenka u sheegeen inay Trump ku yidhaahdeen siyaasaddaa deg deg u jooji.
Hadaba maxay tahay arrinta ku salaysan carruurta laga reebayo waalidiintood muhaajiriinta ah ee haraysay Maraykanka?
Su'aashaasi iyo kuwo kale ayaa waxaan weydiinay garyaqaan Amin Harun oo u warramay weriyaha BBC Maxamed Xaaji Xuseen Shiine.
Maqal Deegaanka beeralleyda ah ee Xaaxi ee Somaliland oo lagu beerayo xiliga deyrta Haruur, Gallay iyo Digir
Deegaanka beeralleyda ah ee Xaaxi ee Somaliland oo lagu beerayo xiliga deyrta Haruur, Gallay iyo Digir
Maqal Acmaasha Xajka oo maanta si toos ah ugu billaabaneysa xujeyda ku sugan Sucuudiga
Acmaasha Xajka oo maanta si toos ah ugu billaabaneysa xujeyda ku sugan Sucuudiga
Maqal Shirka wadatashiga Diyaarinta Hannaanka Qaran ee dib u heshiisiinta Soomaaliya oo Mudisho ka furmay
Shirka wadatashiga Diyaarinta Hannaanka Qaran ee dib u heshiisiinta Soomaaliya oo Mudisho ka furmay
Maqal Dagaalka dhaqaale ee Turkiga iyo Mareykanka halkee ku dambayn doonaa?
Dagaalka dhaqaale ee Turkiga iyo Mareykanka halkee ku dambayn doonaa?
Maqal Maxaa ka mid ah dhibaatooyinka heysta dhalinyarada Somaliland?
Maxaa ka mid ah dhibaatooyinka heysta dhalinyarada Somaliland?
Maqal Koox ka dhisan Hargeysa oo caan ku noqotay ciyaaraha legdinta iyo qalaama-rogodka
Koox ka dhisan Hargeysa oo caan ku noqotay ciyaaraha legdinta iyo qalaama-rogodka